धरानका स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङ भन्छन्– मेरो भोट बैंक गन्न सुरू भएकै छैन, ढुक्क हुनुहोस् मै जित्छु :: राजु अधिकारी :: Setopati
धरानका स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङ भन्छन्– मेरो भोट बैंक गन्न सुरू भएकै छैन, ढुक्क हुनुहोस् मै जित्छु
विराटनगर, जेठ २
स्थानीय चुनावको मतगणना सुरू भएदेखि नै धरानको मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ दोस्रो स्थानमा थिए।
गठबन्धनका कांग्रेस उम्मेदवार किशोर राईलाई पछ्याएका उनले एमाले उम्मेदवार मन्जु भण्डारीलाई पछाडि पारेका थिए।
सोमबार बिहानदेखि एमालेकी मन्जु भण्डारी दोस्रोमा उक्लिएपछि हर्क साम्पाङ तेस्रोमा छन्। तर उनले यो नतिजा अरू केही वडामा पुगेर उल्टिने भन्दै आफू नै विजेता बन्ने दाबी गरेका छन्।
२०७६ को उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले जम्मा ४२२ मत ल्याएका थिए। यसपटक उनले त्यो भोट संख्यामा उल्लेख्य बढोत्तरी गरेका छन्। अहिलेसम्म १०१४८ मत गणना हुँदा हर्कले २३२५ मत पाएका छन्।
लौरो चुनाव चिह्न लिएर ठूला दलहरूलाई चुनौती पेस गरिरहेका उनले आत्मविश्वासी हुँदै भने, ‘अहिलेसम्म मैले अपेक्षा नै नगरेका वडाहरूबाट यत्तिको भोट आयो। मेरो खास भोट बैंक रहेको ठाउँको मत गनेकै छैन। त्यसैले ढुक्क हुनुस्, चुनाव मै जित्छु।’
धरानका १ नम्बर वडादेखि ७ सम्मको गणनामा आफूले नसोचेको मत आएको उनले बताए।
‘वडा नम्बर ८, ११, १५, १६, १७, १८, १९ सबै र १३ को केही भाग मेरो मुख्य प्रभाव क्षेत्र हो,’ उनले भने ‘त्यहाँको मत छोइएको छैन। अब ८ मा मेरो धेरै सुधार हुन्छ। ११ पुगेपछि मेरो मत राम्ररी अघि बढ्नेछ।’
पछिल्लो एक दशकमा धरानमा सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएका हर्क साम्पाङप्रति यसपटक धरानमा धेरै समर्थन देखिएको सेतोपाटीले यसअघि नै उल्लेख गरिसकेको छ। खासगरी जनताका दैनिक समस्याहरू खानेपानी, बिजुली जस्ता मुद्दामा खरो रूपमा जनताको पक्षमा पैरवी गरेकै आधारमा उनले समर्थन पाएका थिए। मतगणनाको सुरूआती रुझानले पनि त्यो देखाइसकेको छ।
वर्षौंदेखि ठूला संगठन र संरचना चलाएका ठूला पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले मेयर जित्छु भन्ने हर्क साम्पाङको दाबीलाई हलुका रूपमा लिँदै आएका थिए। तर गणनापछि ठूला दलहरूको अनुमान फेल खाएको छ।
चुनावअघि सेतोपाटीले धरान उपमहानगरका २० वटै वडाका विभिन्न टोल पुगेर करिब सय जना मतदातासँग कुराकानी गरेको थियो। त्यो बेला यसपालि ४० वर्षीय हर्क साम्पाङप्रति धरानवासीमा अभूतपूर्व आकर्षण देखिएको थियो।
२०७६ मंसिरको उपनिर्वाचन अघिसम्म धरानलाई 'वामपन्थी किल्ला' भनिन्थ्यो। धरानले यो राजनीतिक उपनाम पाउनुका आधार थिए। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएयता धरानमा संघ र स्थानीय तहका सबै चुनाव कम्युनिस्ट पार्टीले जितेका थिए। सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने धरानमा २०४८ सालमा नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी निर्वाचित भए। यो क्षेत्रमा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाहेक हरेक संघीय चुनाव एमालेले नै जित्यो। २०७४ सम्म मेयर पनि उसैले हात पारेको थियो।
सधैंभरि कम्युनिस्टलाई जनप्रतिनिधि बनाउने धरानेले साढे दुई वर्षअघि भने पहिलोपटक गैर कम्युनिस्टलाई मेयर चुने। २०७४ मा निर्वाचित मेयर तारा सुब्बाको मृत्युपछि भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका तिलक राईले 'लालकिल्ला' भनिने धरानमा जितको खाता खोले।
यसपटक गठबन्धनका कारण कांग्रेसका किशोर राई अग्रतामा छन्। उनलाई एमाले र स्वतन्त्रले पछ्याइरहेका छन्। ठूला दलहरूको गठबन्धन एकातिर, अर्कोतिर एमालेको प्रभावका बीचमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कले दाबी गरे जस्तो अवस्था आउला? त्यसका लागि धरानको अन्तिम नतिजा कुर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २, २०७९, ००:२०:००
बिग्रेका कम्युनिष्ट सडेको अन्डाजस्तै गन्धा हुन्छन्: प्रचण्ड (भिडिओ)
चरा चिरबिर गर्ने जंगल मासेर उजाड पार्क, पार्कभित्र बन्दैछ छ फिट चौडा ढलान बाटो
गगनलाई लक्षित गर्दै झलनाथले भने- चारपाटा मुडियोस् भन्नेहरू कहाँ छन्?
रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न- रामकुमारी झाक्रीलाई रूवाएर समाजवाद आउँछ?
पार्टीले मन्त्री बनाएको छ, फिर्ता आऊ भन्दा ज्यान जाला आउन मान्दैनन्: चित्रबहादुर केसी
ललितपुरको जिसस प्रमुखमा कांग्रेसका फुयाँल र उपप्रमुखमा माओवादीका थिङ निर्विरोध
बाजुरामा नयाँ सिडिओ र डिएसपी पठाइयो, बुढीगंगामा चुनावको मिति अझै अनिश्चित
त्रियुगाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका वसन्त बस्नेत विजयी, उपमेयरमा एमालेकी महेश्वरी
उदयपुर त्रियुगाको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयर एमाले उम्मेदवारको अग्रता कायमै
उदयपुरको त्रियुगामा कांग्रेसको अग्रता कायमै, उपमेयरमा एमाले अगाडि
उदयपुरको त्रियुगामा कांग्रेसका बसन्तकुमारले अग्रता बढाए, पूर्वमेयर तेस्रोमा